Ogaden News Agency (ONA) – Dawlada Taliyaaniga oo Taageero Gudoonsiisay Ciidanka Asluubta Soomaaliya.
Dawlada Taliyaaniga oo Taageero Gudoonsiisay Ciidanka Asluubta Soomaaliya.
Dalka Talyaaniga ayaa qalab ciidan ku wareejiyey taliska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, qalabkaasi oo isugu jiray katiinadaha maxaabiista lagu xidho, koofiyado, kabo, dhar iyo gaashaanka looga hortago dibad-baxyada rabshadaha wata.
Jeneraal Cabdikariin Cali Afrax oo ah taliye ku xigeenka 1-aad ee ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyey deeqda ay dowladda Talyaaniga ugu deeqday ciidanka Asluubta.
Jeneraal Afrax oo la hadlay saxafaadda ayaa sheegay in dowladda Talyaaniga ay tahay dowladda mar walba garab taagan dowladda Soomaliya, isagoo ka mahadceliyey qalabka loogu deeqay ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Madaxa hay’adda gar-gaarka Talyaaniga ee howl galka Midowga Yurub ee Soomaaliya Korneel Bernardo Mencraglia ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan ciidanka Asluubta Somaaliyeed isla markaana ay ka go’an tahay ka qeyb qaadashada dhismaha ciidamada . Talyaaniga ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah u caawiyo dalka Soomaaliya.